QABYAALADDA HADDII AAN SI NA BA UGA MAARMI WEYNAY CILMI BAADHIS MA KU SAMAYNAA
Monday June 04, 2018 - 12:33:56 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Maadaama si kasta oo looga hadlay iyo wacyi-gelin kasta oo laga saameeyay tix iyo tiraabba weli qabyaaladdu tahay mid
aan xataa qaddar yar hoos u dhicin waxa aan ku fekeray tolow haddii iyada lafteeda la tayeeyo khasaareheedu intan ma ka yaraan lahaa?! Taasi u dhiganta; COLKA WADHAF MA LAGU DAYAY?
Weydiimaha kale ee iyana taariikh ahaan ahmiyadda leh waxa ugu horreeya, Dadku ma iyagaa doortay Qarannimada Qabiilku Bud-dhigga u yahay? Mise Siyaasiga ayaa u dooray? "Clan based politics"
Mar haddii sed-qaybsigeenu qabiil salka ku hayo, qabiil cilmi baadhis lagu sameeyay oo xog sugan laga hayo in uu salka ku hayo ayaa wanaagsan. Halkaasina na waa barta aan u doonayo in Hay'ad loo sameeyo taasi oo daraasaad rasmi ah ku sameysa Qabaa'ilka.
Is-diiddooyinka innaga hor yimid waxa ka mid ah shilka burburka badan ka dhashay ee isku dhaca danta Qaranka iyo tan Qabiilka. Mas'uul kasta oo xil loo magacaabo laba dariiq mid uun baa u bannaan in uu Qaranka u shaqeeyo iyo in uu Qabiilka u shaqeeeyo. Mas'uulka Qaranka u shaqeeya ee ka dhago-adayga dalabaadka qabiilku wuxuu la kulmaa cimri degdeg siyaasadeed oo kuwa magaca reerkiisa ku shaqaysta ayaa ka dacweeya madaxweynaha oo yidhaa; NA MA MATALO. Halkaa na xilka ayaa lagaga xayuubiyaa.